इंग्ल्यान्ड २७ वर्षपछि विश्वकपको फाइनलमा, अष्ट्रेलिया पराजित
घरेलु टोली इंग्ल्यान्ड एकदिवसिय विश्वकप २०१९ को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । विहीबार भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा साविक विजेता अष्ट्रेलियालाई ८ विकेटले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड २७ वर्षपछि विश्वकपको फाइनलमा
प्रवेश गरेको हो । अब इंग्ल्यान्डले उपाधिको लागि आईतबार लर्डसमा न्युजिल्यान्डसँग खेल्ने छ । न्युजिल्यान्डले पहिलो सेमिफाइनल
खेलमा भारतलाई स्तब्ध पार्दै फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो ।
अष्ट्रेलियाले प्रस्तुत गरेको २ सय २४ रनको मध्यम विजयी लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्यान्डले ३३ औं ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो ।.इंग्ल्यान्डको लागि ओपनर जोसन रोयले
सर्वाधिक ८५ रनको योगदान दिए । प्याट कमिन्सले २० ओभरको चौथो बलमा कट बिहाइन्ड निकाल्दै विकेटकीपर एलेक्स केरीबाट क्याच आउट गराउनु अघि रोयले ६५ बलमा ९ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे । रोयले पहिलो विकेटका लागि जोनी बेयरस्टोसँग १७.२ ओभरमा १ सय २४ रनको शतकीयसाझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए ।
मिचेल स्टार्कले एलबीडब्लू आउट गर्नुअघि बेयरस्टोले ४३ बलमा ५ चौका सहित ३४ रन जोडे । जो रुट ४६ बलमा ८ चौका सहित ४९ रनमा अविजित रहे । त्यस्तै कप्तान इओन मोर्गन पनि ३८ बलमा ८ चौकासहित ४५ रनमा नट आउट रहँदै फाइनलमा स्थान पक्का गरे । अष्ट्रेलियाका लागि मिचेल स्टार्क र प्याट कमिन्सको नाममा समान १ विकेट रह्यो ।
त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएको अष्ट्रेलिया ४९ ओभरमा अल आउट हुँदै २ सय २३ रनमा समेटियो । अष्ट्रेलियाका लागि स्टिभ स्मिथले सर्वाधिक ८५ रनको योगदान दिए।
४८ ओभरको पहिलो बलमा रन आउट हुनुअघि स्मिथले १ सय १९ बलमा ६ चौका प्रहार गरे । अष्ट्रेलियाले दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा
ओपनर तथा कप्तान आरोन फिन्चलाई शुन्यमा गुमाएको थियो । उनलाई जोफ्रा आर्चरले एलबी डब्लू आउट गरे । तेस्रो ओभरको चौथो बलमा अर्का ओपनर डेविड वार्नर ९ रनमा क्याच आउट हुन पुगे । उनलाई क्रिस वोक्सले जोनी बेयरस्टोबाट क्याच आउट गराउँदै सुरुवाती समय दबाबमा राखे । वोक्सले सातौं ओभरको पहिलो बलमा पिटर हेन्डस्कम्बलाई ४ रनमा बोल्ड आउ गरेपछि अष्ट्रेलिया १४–३ को कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो ।
चौथो विकेटका लागि एलेक्स केरी र स्टिभ स्मिथले १ सय ३ रनको शतकीय साझेदारी गर्दै सुरुवाती दबाब कम गर्दै इनिङ उकासे । चोटका बाबजुद खेलि रहेका केरी आदिल राशिदको २८ ओभरको दोस्रो बलमा ठूलो सर्ट खेल्ने धुनमा बाउन्डी लाइन नजिकै सब फिल्डर जेम्श भिन्सबाट क्याच हुँदै ४६ रनमा पेभिलिएन फर्किए । स्मिथलाई राम्रो साथ दिएका उनले ७० बलमा ४ चौका प्रहार गरे । यसै ओभरको
अन्तिम बलमा मार्कस स्टोइनिस एलवी डब्लू आउट हुँदै शुन्यमा पेभिलिएन फर्केपछि अष्ट्रेलिया पुन दबाबमा पर्यो ।
आर्चरको ३५ ओभरको पाँचौ बलमा ग्लेन म्याक्सवेल २३ बलमा २ चौका र १ छक्का सहित २२ रनमा कप्तान इओन मोर्गनबाट क्याच
आउट हुन पुगे । प्याट कमिन्स पनि ६ रनमा क्याच आउट भए ।
तल्लोक्रममा मिचेल स्टार्कले ३६ बलमा समान १ चौका र छक्का सहित २९ रनको महत्वपूर्ण योगदान दिए । नाथन लायन ५ र जेसन
बेहरनडर्फले १ रन जोडे । इंग्ल्यान्डका लागि क्रिस वोक्सले ८ ओभरमा २० रन खर्चेर ३ विकेट लिए । आदिल राशिदले १० ओभरमा
५४ रन खर्चेर ३ विकेट हात पारे । जोफ्रा आर्चरले १० ओभरमा ३२ रन खर्चेर २ विकेट हात पारे । मार्क उडको नाममा १ विकेट रह्यो।
← पत्याउनुस् ! यसरी बन्यो एउटै बलमा २८६ रन !!
आजको राशिफल:वि.सं.२०७६ साल असार २७ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०१९ जुलाई १२ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । →
विश्वकप क्रिकेटको फाइनल खेल रद्द भए के हुन्छ ? आईसीसीले बनायो नयाँ नियम…
June 15, 2019 sajhachautari.com 0